Wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Oo Dowlada Federalka ku Tilmaamay In ay Balamo Uga Baxday Roobow -
HomeWararkaWasiirkii hore ee Gaashaandhigga Oo Dowlada Federalka ku Tilmaamay In ay Balamo Uga Baxday Roobow
Wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Oo Dowlada Federalka ku Tilmaamay In ay Balamo Uga Baxday Roobow
October 9, 2018 F.G Wararka 0
Wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Soomaaliya C/rashiid Cabdullahi Maxamed oo ahaa shaqsigii bilaabay wada hadalka dhexmaray dowladda federaalka iyo Sheekh Muqtaar Roobow ayaa wuxuu sheegay qaabkii lagu balamay in badan oo ka mid ah in dowladda dhankeeda uusan ka fulin.
Wuxuu sheegay qodobada la isku afgartay ee dhanka dowladda uu ka fuli waayay in ay ka mid aheyd in si wadajir ah oo dalka iyo dadka dano ah lagu wada hawlgalo, balse arrintaasi iyo kuwa kaleba ay dowladda ka baxday.
“Muqtaar Shabaab mar hore ayuu ka baxay, warkiisana wuu cadeeyay, dagaallo lala galay Shabaab wiilkiisa C/laahi ayaa kaga dhintay, marin habaabin ayaan u aragnaa in Muqtaar markale lagu tiriyo Shabaab, dano siyaasadeed ayaa laga leeyahay arrintan”. ayuu yiri wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya oo la hadlay VOA-da.
Sidoo kale Wuxuu sheegay intii uu wasiirka ka ahaa wasaaradda gaashaandhigga in lagu balamay Shabaab intooda ku haboon in wada hadal lala galo, inta kalena dagaal toos ah lagu qaado, balse dowladda ayuu tilmaamay inay arrimahaasi meel iska dhigtay oo ay ku mashquushay siyaasadda maamul goboleedyada iyo doorashooyinka 2020-ka.
C/rashiid C/laahi ayaa tilmaamay ololaha doorashada Roobow inay soo bilaabatay mar hore dowladda hadii ay dooneysay in ay wax saxdana goor hore ayaa laga rabay Hase ahaatee in ay soo saarto warqada ay ku hor istaageeyso, waxaan u aragnaa in dano siyaasadeed laga leeyahay is hor istaaga lagu sameeyay Roobow.
Sheekh Muqtaar Roobow oo todobaadkii hore tagay magaalada Baydhabo ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed, dad badan ayaa aaminsan hadii xilkaasi uu qabto inuu isbedel weyn sameyn karo